मन्त्रीको टुंगो लगाउँदै माओवादी केन्द्र, कोको छन् लाइनमा ? | Safal Khabar
मन्त्रीको टुंगो लगाउँदै माओवादी केन्द्र, कोको छन् लाइनमा ?
आइतबार, १७ साउन २०७८, १० : ५६
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको आज स्थायी कमिटीको बैठक डाकिएको छ । सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको बारेमा टुंगो लगाउने कसरत गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको आजको स्थायी कमिटीले यस विषयमा फाइनल निर्णय गर्नेछ ।
पार्टी कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले बिहान ११ बजे पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बस्न लागेको जानकारी दिए। असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएपछि माओवादी केन्द्रबाट दुईजना मन्त्रीले मात्रै सपथ लिएका थिए। त्यसयता मन्त्री परिषद् विस्तार हुन सकेको छैन।
माओवादी केन्द्रमा मन्त्रीको आकांक्षी धेरै रहेका छन् । केही दिनअघि नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले मन्त्रीको आकांक्षी धेरै भएका कारण आफू तनावमा रहेको बताएका थिए । माओवादीमा देव गुरुङ, हरिबोल गजुरेल, वर्षमान पुन, देवेन्द्र पौडेल, मात्रिका यादव, शक्ति बस्नेतलगायतका नेता मन्त्री बन्ने लाइनमा रहेका छन् । माओवादीले बढीमा सात मन्त्रालय पाउनेछ । दुई मन्त्री माओवादीबाट बनिसकेका छन् ।